I-Dong Van* Lô Lô ChŘi Village * 2Pax * Igumbi labucala - I-Airbnb
I-Dong Van* Lô Lô ChŘi Village * 2Pax * Igumbi labucala
Igumbi lakho lokulala e indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga sinombuki zindwendwe onguThe Lover
UThe Lover unezimvo eziyi-41 zezinye iindawo.
Le ndlu iphakathi kweyona lali ikude kakhulu yaseVietnam, kumda weTshayina. Silungise izindlu zakwantu ezinamagumbi angasese acocekileyo, iibhafu zamanzi ashushu. Yenza izihlalo ezongezelelweyo zeCafe, ibha kunye neebhalkhoni ubukele imbonakalo yomhlaba enenduli. Siphinde sathetha nabahlali belali kwaye kunye nabo baye baqulunqa uhambo oluhambahambayo ukutyelela ilali, saya kuhlola umlambo iNho Que, saya kubona ukutshona kwelanga kunye nokuphuma kwelanga. Ndijonge phambili ukukubona apha.
Le ndlu iphakathi kweyona lali ikude kakhulu yaseVietnam, kumda weTshayina. Ilali yaseLo Lo Chai inezindlu eziphantse zibe li-100.
Ubomi babahlali belali buhlwempuzekile, bangabalimi abahluphekayo kodwa bahlala bonwabile. Ikhaya lethu luncedo lwabahlobo baseHanoi abafuna ukunceda abantu balapha ishishini lokuhlala ekhaya.
Salungisa izindlu zabahlali belali. Yongeza amagumbi angasese, iibhafu zamanzi ashushu. Yenza izihlalo ezongezelelweyo zeCafe, ibha kunye neebhalkhoni ubukele imbonakalo yomhlaba enenduli. Siphinde sathetha nabahlali belali kwaye kunye nabo baye baqulunqa uhambo oluhambahambayo ukutyelela ilali, saya kuhlola umlambo iNho Que, saya kubona ukutshona kwelanga kunye nokuphuma kwelanga.
Ndijonge phambili ukukubona apha. Sithanda ukubulela xa unikela ngomthi weentyatyambo omncinci ocinga ukuba ungahlala apha.
Ungasebenzisa indawo yokupaka yasimahla, indawo yeBBQ (kodwa kufuneka uthenge iinkuni zokubhaka izinto).
Ungajikeleza ilali ujonge ubomi babahlali. Unokuhlala kwi cafe kwibalcony kwaye wonwabele umoya omtsha apha.
Ukuba ufuna ukuququzelela isifundo sesiNgesi samahhala kubantwana bedolophana, siyavuya ukukunceda ukuba wenze oko.
Umbuki zindwendwe ngu- The Lover
Singathetha isiNgesi ngeposi, sifowune nawe ngokukhawuleza emva kokufumana inkcazelo yakho. E-Lo Lo abantu sisebenzisa kancinci kakhulu kodwa sisenokusebenzisa isiNgesi ukuze sinxibelelane size sibe nomatshini wokuguqulela. Sisanda kwamkela iindwendwe zangaphandle, ngoko sifuna ukuba uqonde kwaye usincede sifunde ulwimi lwakho njengabantu baseSapa abathetha isiNgesi kakuhle ngoku.
Singathetha isiNgesi ngeposi, sifowune nawe ngokukhawuleza emva kokufumana inkcazelo yakho. E-Lo Lo abantu sisebenzisa kancinci kakhulu kodwa sisenokusebenzisa isiNgesi ukuze sinxi…